Video Mampianatra ny Ankizy sy Mampifaly ny Fon’izy Ireo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bichlamar Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Goun Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Poloney Portogey Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Vezo Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Video Mampifaly ny Fo
Hoy ny raim-pianakaviana iray any Malezia rehefa nahita an’ireo video hoe Ataovy Namanao i Jehovah: “Hoatran’ny mahita ny ao am-pon’ny ray aman-dreny mihitsy i Jehovah.”
Namokatra video maromaro momba an’i Kaleba sy ny fianakaviany ny Vavolombelon’i Jehovah, taorian’ny namoahany an’ilay video voalohany. Efa ao amin’ny jw.org izao ireny video ireny, izay mampianatra ny ankizy mba ho tsara toetra sy hifandray amin’Andriamanitra. Ampianarina mba tsy hangalatra sy hahay hivavaka, ohatra, ny ankizy ao amin’ny video sasany.
Efa voadika amin’ny fiteny 131 izao ireo video roa voalohany ka mahasoa ny ankizy eran-tany.
Be mpankafy ilay izy
Nanoratra toy izao ny renim-pianakaviana iray manan-janaka dimy: “Efa in-50 teo ho eo izahay no nijery an’ilay video hoe Izay Mihaino sy Mankatò dia Hotahina Tokoa, hatramin’ny nahazoanay an’ilay izy herinandro lasa izay.”
Mipetraka any Angletera i Millie izay 12 taona. Manana zoky lahy 15 taona atao hoe Thomas izy ary sembana ara-tsaina io zokiny io. Hoy i Millie: “Manana iPad misy an’ireo video misy an’i Kaleba i Thomas, ka azony aseho amin’ny namany any am-pianarana izany. Tiany be ireo hira ao ary mahafinaritra erỳ ny mihaino azy mihira azy ireo. Gaga be aho mijery azy. Nitomany mihitsy ny rahavavy iray nihaino azy.”
Nilaza i Ava hoe 8 taona sy 9 volana ary 25 andro izy. Nanoratra toy izao izy: “Tena mahay mampianatra ankizy i Kaleba sy ny anabaviny.”
Nanoratra toy izao indray i Mikaylah: “Enin-taona aho. Misaotra amin’ilay video hoe Izay Mihaino sy Mankatò dia Hotahina Tokoa. Mampianatra ahy ilay izy hoe mila mankatò an’i Dada sy Neny aho satria mahafaly an’i Jehovah izany.”
Tena misy dikany
Nijery an’ilay video hoe Ratsy ny Mangalatra ny tovolahy iray mpanao sary miaina, izay tsy Vavolombelon’i Jehovah. Talanjona izy nahita an’ilay video, ary vao mainka gaga rehefa fantany hoe ekipa kely anankiray tsy nisy afa-tsy olona vitsivitsy no namokatra an’ilay izy. Hoy izy: ‘Mahafantatra olona miasa amin’ny trano famokarana sary miaina aho, ary lasa saina aho indraindray hoe mba hoatran’ny ahoana àry ny miasa amin’izy ireny. Miasa mafy izy ireo, nefa zavatra mampihomehy mandritra ny ora vitsivitsy fotsiny no vitany ao anatin’ny iray andro, dia izay! Ny video avoakanareo kosa anefa manova ny fiainan’ny ankizy, mampianatra azy hanavaka ny tsara sy ny ratsy, ary manampy azy handray fanapahan-kevitra tsara. Tena misy dikany ny zavatra ataonareo satria manampy olona.’
Manaiky an’izany ny ray aman-dreny eran-tany. Nanoratra toy izao ny renim-pianakaviana iray: “Nijery an’ilay video hoe Miezaha mba ho Naman’i Jehovah i Quinn, zanako lahy telo taona. Nitraka nijery ahy izy rehefa teny amin’ny fisasahan’ilay hira ao amin’ilay video, dia nataony teo amin’ny tratrany ny tanan-keliny, sady niteny izy hoe: ‘Neny a, faly be ny foko mijery an’io.’”
Tantara Kely Tena Tian’ny Ankizy